EVY's Kitchen: March 2012
Posted by Evy at 7:39 PM5comments:
Posted by Evy at 10:58 PM 14 comments:
Posted by Evy at 5:03 PM 10 comments:
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပတ်ပါပဲ။ အရွက်ကြော်တွေချည်းပဲ။ ခုတစ်ခါတော့ အရမ်းကို စားလို့ကောင်းတဲ့ ဟင်းနုနယ်ကြော်လေးပါ။ ကြက်သားအမွကြော် ၊ ဟင်းအနှစ်ပိုတာလေးတွေကို အသုံးချထားတာပါ။ အိမ်မှာ ဟင်းအနှစ်တွေ ပိုနေရင် မသွန်ပြစ်လိုက်နဲ့နော် ။ ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်။ ဒါကတော့ တစ်ယောက်စာ ဟင်းနုနယ် အထုပ်တစ်ဝက်ကို သုံးတာပါ။ ကြော်ချင်တဲ့ ပမာဏကို လိုက်ပြီး ဟင်းအနှစ်ကို လိုတိုးပိုလျော့လုပ်ပါ။
ပထမဆုံး ဟင်းနုနယ်တွေကို ချွေထားပြီး ရေဆေးထားလိုက်ပါ
ဆီ စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်းကို အပူပေးပြီး ကြက်သွန်ဖြူ ၁ မွှာကိုဆီသတ်ပေးပါ
ပြီးရင် ဟင်းနုနယ်လေးတွေကို ထည့်ကြော်ပေးပါ။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ခရုဆီ လက်ဖက်ရည် ၁ဇွန်းကို ထည့်မွှေပေးပါ။ ပြီးရင်ရေလဲနဲနဲထည့် အဖုံးအုပ်ထားပါ။
နောက်ဆုံး ကြက်သားအမွကြော် ၁ ဇွန်း။ ငရုပ်သီး နဲ့ ဟင်းအနှစ် ၁ ဇွန်းကို ထည့်မွှေပေးပြီး ၂ မိနစ်လောက်ကြော်ပေးရင် ရပါပြီ
ထမင်းဖြူဖြူလေးနဲ့စားရင် သိပ်ကောင်းပါတယ်။ လုပ်ရတာလဲလွယ်ပြီး အရသာရှိသော ဟင်းရံတစ်ခွက်ပါ။
Posted by Evy at 9:21 PM2comments:
တရုပ်ကိုက်လံကို ဗမာနည်းနဲ့ ရောမွှေထားတဲ့ အကြော်တစ်မျိုးပါ။ကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကိုက်လံက နဲနဲသက်တဲ့အရသာရှိပေမယ်လို့ကြက်သားအမွကြော်နဲ့ရောကြော်ထားတာကြောင့် တော်တော်စားလို့ကောင်းနေပါတယ်။ ကျွန်မက ညနေစာကို ထမင်းသိပ်စားလေ့ပဲ ဒီလိုအသီးအရွက်ကြော်တို့ သစ်သီးတို့တွေစားလေ့ရှိပါတယ်။ ထမင်းပူပူလေးနဲ့ တွဲစားရင်လည်း ကောင်းပါတယ်။
ကြက်သားကြော်ကတော့ အရင်ကလည်း ရေးဖူးတာမို့ ဒီပို့စ်ကို ပဲဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ကိုက်လံ ၃၊ ၄ ချောင်းလောက်ကို ဆေးကြောပြီး အပိုင်းလေးတွေလှီးဖြတ်ထားပါ။
ခရုဆီ စားပွဲဇွန်းတစ်ဇွန်းကို ရေနဲနဲ နဲ့ ထည့်ဖျော်ထားပါ။
ပထမဆုံး ဆီစားပွဲဇွန်း ၁ဇွန်းလောက်ကို ပူအောင်တည်ပြီး ကိုက်လံအရိုးတွေကို အရင်ထည့်ကြော်ပေးပါ။ ရေနဲနဲတောက် အဖုံးအုပ်ပြီး ၁မိနစ်လောက် ကြော်ပေးပါတယ်။ နောက်မှကိုက်လံ အရွက်တွေထည့် ကြက်သား အမွကြော် ၂ ဇွန်းထည့်။ ခုနက ခရုဆီရေဖျော်ထားတာ နဲ့ ဆား၊ အချိုမှုန့် အနဲငယ် ထည့်ပြီး ၃ မိနစ်လောက်ကြော်ပေးရင်ရပါပြီ။ ဗမာ့နည်း ဗမာ့ဟန်ကိုက်လံကြော်ပေါ့။
Posted by Evy at 1:02 PM3comments:
Posted by Evy at 2:01 PM 8 comments:
Posted by Evy at 11:47 AM5comments:
Posted by Evy at 5:16 PM3comments:
Posted by Evy at 5:53 PM3comments:
ချိုချို အီအီဆိမ့်ဆိမ့် swill roll စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကအဲဒီ အရသာအပြည့်ပါတဲ့ မုန့်လေးပေါ့။ ဟိုတစ်နေ့က သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လာလည်မှာမို့ လုပ်ထားတာလေးပါ။ အီတဲ့ ဖက်ကို ပိုရောက်ပါတယ် ။ ကျွန်မအတွက်တော့ နဲနဲချိုလွန်းတယ်။ မအီခံနိုင်လားနော် ကိတ်မုန့်အချိုကိုမှ Cream Cheese အစာသွပ်ထားတာကိုး။ အဲဒီနေ့က လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းကို အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကျွေးတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီမုန့်နဲ့ ကော်ဖီနဲ့ အစာပိတ်ဆိုတော့ အဲဒီအစ်မတော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိ ကျွေးတဲ့ လူကတော့ မျက်လုံးတောင် သိပ်မပွင့်တော့ဘူး :D :D ။ ဘလော့လာလည်တဲ့ သူများကိုလည်း အဲလိုဖြစ်အောင် ၂ ခုလုံးကျွေးပါမယ် ။
ထုံးစံအတိုင်း လုပ်နည်းလေးကြည့်လိုက်ရအောင်။ မခက်ပါဘူးနော်။
ကြက်ဥ ၁၂၆ ဂရမ် - ဒီတစ်ခါ ၃ လုံးထည့်တယ်
မုန့်ကို ဖိုကထုတ်ပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက်ဗန်းထဲက ထုတ်ပြီးအအေးခံပါ
အေးသွားတာနဲ့မုန့်ဖုတ်စက္ကူနောက်တစ်ခုပေါ်ကိုမှောက်ချ။ မုန့်မှာကပ်နေတဲ့ စက္ကူကိုခွာ။ ခရင်မ်ကို သုတ်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းလိပ်ယူပါ . မုန့်က သိပ်နူးညံ့တာမို့ သတိထားပြီးလိပ်ယူပါ. ဒါဆိုမုန့်လေးတစ်ခုရပြီပေါ့။
ribbon like stage ဆိုတာ ဒီလိုအနေကို ဆိုလိုတာပါ
သုံးတဲ့ Cream Cheese
့ Cream Cheese ရယ်သကြားရယ် ချောကလက် အနည်းငယ်ကို မွှေထားတာ (မအီခံနိုင်မလားနော်)
မုန့်လှီးတာ နဲနဲ မသပ်မရပ်ဖြစ်သွားတယ်
အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ။ လုပ်နည်းတော့ မရေးတော့ပါဘူး။ အားလုံးချက်တတ်ပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။
Posted by Evy at 10:22 AM4comments:
Labels: Cooking, Swiss Roll